सुरेन्द्र पाण्डेमाथि भएको घटना सुनियोजितः नेता खनाल ! « MNTVONLINE.COM
सुरेन्द्र पाण्डेमाथि भएको घटना सुनियोजितः नेता खनाल !
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेमाथि भएको अक्रमण सुनियोजित भएको बताएका छन् । नेता खनालले एक वक्तव्य जारी गर्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले पाण्डेमाथि भएको सुनियोजित घटनाले गम्भीर बनाएको बताएका हुन् ।
पाण्डेले आफ्ना भनाइ राखिरहेको बेला केही अराजक व्यक्तिहरुले गरेको अभद्र व्यवहार र नाराबाजीलाई लिएर नेता खनालले घोर निन्दा तथा भर्त्सना गरेका छन् । उनले कम्युनिस्ट पार्टीको नैतिक मूल्य, आचरण र आदर्श विपरीत भएको घटनामा संलग्नलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्नेतर्फ पार्टी कमिटीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
नेता खनालले पार्टीमा आन्तरिक विवाद उत्कर्शमा पुगेको र त्यसको सही समाधान गर्न उपायहरु खोजी भइरहेको परिस्थितिमा घट्ने यस्ता घटनाहरुले स्थितिलाई झन उत्तेजित बनाउनेतर्फ सचेत रहन सम्पुर्ण नेता कार्यकर्तालाई अनुरोध गरेका छन् ।
नेता पाण्डेमाथि शनिबार चितवनमा नेकपाकै कार्यकर्ताले नाराबाजी गरेका थिए ।